Cudurka Crohn ee Carruurta iyo Dhalinyarada | Bezzia
Cudurka Crohn ee carruurta iyo dhallinyarada
Maria Jose Roldan | 28/08/2021 13:48 | Dhallinyaro, Wiilkaaga
Cudurrada ka dhasha caloosha iyo xiidmaha waxay noqonayaan kuwo soo noqnoqda oo ku badan carruurta iyo dhallinyarada. Xogta ayaa tilmaamaysa in sanad walba carruur badan ay la xanuunsadaan xanuunka noocaan ah, cudurka Crohn ayaa ugu muhiimsan.
Xaaladdan oo kale oo saameysa nidaamka dheef -shiidka, Waxay ka kooban tahay barar xoog leh qaybta ugu dambaysa ee xiidmaha yar iyo bilowga kan weyn. Maqaalka soo socda waxaan ku tusineynaa sida cudurka noocaan ah u saameeyo carruurta iyo dhallinyarada iyo waxa ay tahay in waalidku ka sameeyo.
1 Sababaha cudurka Crohn ee carruurta
2 Sidee cudurka Crohn u muuqdaa
3 Maxay Waalidku Ka Qaban Karaan Cudurka Crohn
Sababaha cudurka Crohn ee carruurta
Illaa maanta, ma jirto sabab gaar ah oo uu ilmuhu ugu dhici karo xanuunka mindhicirka Waxaa jira arrimo kala duwan sida cuntada ama caadooyinka nadaafadda oo sababi kara in carruurtu ku dhacdo cudurkan oo kale, sababtuna tahay hoos -u -dhac ku yimid difaacooda. Waxa kale oo sababi kara sabab hidde iyo taariikhda qoyska ilmaha.
Sidee cudurka Crohn u muuqdaa
Waxaa jira dhowr calaamadood oo tilmaami kara in ilmuhu qabo cudurka Crohn:
Shubanku waa mid ka mid ah calaamadaha ugu badan ee xaaladdan oo kale ah. Haddii shubankaan uu weheliyo dhiig, waxaa aad suurtogal u ah inuu barar ka jiro aagga xiidmaha. Haddii xaddiga shubanka uu yahay mid ku filan, waa iska caadi in bararku ku dhaco xiidmaha yar.
Mid kale oo ka mid ah calaamadaha ugu cad ee cudurkan waa xanuunka dhammaan aagga caloosha.
Cunto yari oo ay weheliso miisaanka oo yaraada.
Tamar la’aan iyo daal saacadaha maalintii oo dhan.
Muuqaalka boogaha iyo fistulas.
Dhibaatooyinka wadajirka ah inay awoodaan inay keenaan arthritis.
Maxay Waalidku Ka Qaban Karaan Cudurka Crohn
Nasiib darro waa nooc ka mid ah xaalado dabadheeraad ah oo aan daawo lahayn. Ilmuhu waa inuu noloshiisa oo dhan ku noolaadaa xanuuno mindhicir. Waxaa jiri doona waqtiyo ay calaamaduhu aad u ba'an yihiin marka la barbar dhigo waqtiyada kale ee astaamuhu aad u khafiif yihiin. Daaweynta la raacayo waa inay lahaataa ujeeddo ah in la yareeyo astaamaha oo laga caawiyo ilmaha ama qofka dhallinyarada ah sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolol caadi ah intii suurtogal ah. Isbeddel ku yimaadda caadooyinka cuntada ama qaadashada daawooyinka qaarkood waxay kaa caawin karaan xakamaynta cudurka Crohn.
Gaaban, Cudurka Crohn wuxuu ku badan yahay qaangaarnimada marka loo eego carruurnimada,Inkasta oo xogtu tilmaamayso in ay sii kordhayaan carruurta la ildaran xanuunka noocan ah. Calaamadaha, waxay la mid yihiin dadka waaweyn sida carruurta. Haddii xaaladdan la gaarsiiyo xilliga qaangaarnimada, waxaa suurtogal ah in cudurku ku dhammaado inuu saamayn taban ku yeesho horumarka caadiga ah ee qofka dhallinyarada ah. Khubaradu waxay tilmaamaan muhiimadda ay leedahay in carruurta laga bilaabo da 'yarta, caadooyinka wanaagsan ee cunnada si looga hortago inay yeeshaan xaalad mindhicir oo kale ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Dhallinyaro » Cudurka Crohn ee carruurta iyo dhallinyarada
Cuntooyinka ugu waaweyn ee lagula dagaallamo daalka
Shahaadooyinka dharka ee waara ee ay tahay inaad ogaato